Maalinta: Juun 23, 2017
Tareenka Nostanji iyo Tram Stop Parking
Nostanji Tram iyo Tram Stop waa la iibsan doonaa waaxda Adeegyada Taageerada Dawlada Duzce ee NOSTANGI TRAMWARE IYO TRAMWA WAITING STOP Iibsiga soo iibsiga wuxuu furan yahay sida ku xusan qodobka 4734 ee 19 [More ...]
Gawaarida Akbariye oo ka badan rajo laga qabo
Khadkii tareenka Akçaray ayaa dhammaaday. Magaalada oo ay leedahay Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli [More ...]
Diyaarinta Ciidda Caruurta ee Ordu Boztepe Ropeway: ORBEL A.Ş., oo ah mid hoose oo ka tirsan Dowlada Hoose ee Ordu. Saacadaha adeegga ee Khadka Caruurta ee Ordu-Boztepe ee ay shirkaddu maamusho ayaa dib loo abaabulay Iiddii Ramadaanka awgeed. Altınordu oo leh xarunta degmada [More ...]
Gaadiidka Magaalada ee Manisa Lacag la'aan [More ...]
Degmada Kocaeli oo ku dhawaaqday Gaadiidka Bayrama lacag la'aan
Dowlada Hoose ee Kocaeli waxay ku dhawaaqeysaa Ciidda Gaadiidka Bilaashka ah: Kocaeli Magaalo Weyn, oo ay weheliso 4, 24, 25, 26, 27, oo ay weheliso habeenka Ciidul Fitriga si loogu suurta geliyo muwaadiniinta inay la kulmaan asxaabta iyo qaraabada. [More ...]
Horumarinta Metro: Furitaanka 2020!
Kaynarca-Tuzla iyo Pendik Central-Kaynarca Lines Metro Lines, oo ay bilaabeen inay dhisaan Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul, ayaa waxaa soo dhoweeyay dadka deegaanka. Wadarta dhererka mitirka dhererka dhererka ee dhererkiisu yahay 12 waa la dhammeysan doonaa waxaana la gelin doonaa adeegga 2020 sanadka [More ...]
İsa ApaydınFarriinta Ramadaan
İsa ApaydınFarriinta Ciidul Fitriga: Saaxiibtinimada, walaaltinimada iyo wadaagida shucuurta ayaa soo gabagabeynaya Ciidul Fitriga, waxaan la kulmaynaa farxad iyo farxad. Waxaan ka shaqeynaa khadadka Ankara-İstanbul, Ankara-Konya iyo Konya İstanbul. [More ...]
Kulan macluumaad ah oo ku saabsan alaabada khatarta leh ee Tareenka ayaa la qabtay: Maaddaama uu yahay Kaaliyaha Kaabayaasha Tareenka ee qawaaniinta qaran iyo kuwa caalamiga ah ee ku saabsan “Farsamada Gaadiidka Alaabada Khatarta ah ee qaybtooda xamuulka [More ...]
Tababar ka socda Istanbul ilaa Srebrenica
Tareenka ka imanaya Istanbul ilaa Srebrenica ayaa bixi doona: Ururka Caalamiga ah ee Caruurta ayaa qaadan doona tababarka XXXX dhalinyarada Bosnia si ay uga qeybgalaan Maarso Mira Maarso sanadguurada xasuuqii Srebrenica. Ururka Caalamiga ah ee Caruurta, 100 ilaa ururada kala duwan [More ...]
50 Gaadiidka Lacagta La Saaray ee Ramadaan
Gaadiidka ee Istanbul inta lagu gudajiro Bisha Ramadaan 50 Qiimo-dhimis: Dowlada Hoose ee Magaaladda Istanbul waxay ku dhawaaqday in İETT bus, metrobus, metro, taraam, Taksim-Kabataş funicular iyo burcadka magaalada İstanbul Otobüs A.Ş. iyo caado [More ...]
RayHaber 23.06.2017 Warbixinta Shirka
Gawaarida Nooca Tareenka ayaa la iibsan doonaa (TÜDEMSAŞ) Sahaminta tareenka ee Erzincan-Erzurum, Mashruuca, Injineerka iyo Adeegga Wadajirka ee Gawaarida Gawaarida Mashiinka waxaa lagu iibsan doonaa cusboonaysiinta Nidaamka Kaameerada ee Kütahya iyo Saldhigga Tareenka ee Tavşanlı [More ...]
Gaadiidka ayaa ka dhigaya Lausanne iyo Montreux
Soo-celinta Tramway ee Lausanne iyo Montreux: İzmir Magaala-weynta Magaalo-Weyne ayaa dib u cusbooneysiineysa labajibaarayaasha Lausanne iyo Montreux ee wadada tareenka Konak Tramway iyadoo la raacayo asalka. Dowlada Hoose ee Magaalada polzmir, Wadada gudaheeda iyada oo lafiirinayo howlaha soosaarka Konak Tramway [More ...]